Pluto TV: hanomboka amin'ny fantsona dimy vaovao maimaim-poana | Avy amin'ny Linux
Pluto TV: hanomboka premiere fantsona dimy maimaim-poana
Isaac | | fampiharana, About us
Ho an'ireo mbola tsy mahalala izany, Pluto TV dia sehatra horonantsary mivantana an'ny ViacomCBS. Ny California dia natsangana tamin'ny 2013, ary hatramin'ny nanombohany dia nitombo ny isan'ny mpanaraka azy, satria ny iray amin'ireo tombony lehibe dia ny maimaim-poana, tsy misy sarany famandrihana toy ny Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Apple TV + , FlixOlé, sns.
Ho fanampin'izay, tsy nanao ambanin-javatra ny serivisy izy, satria mitranga amin'ny sehatra hafa maimaimpoana izay mamela betsaka ny faniriana. Amin'ity tranga ity, ny atin'ny sehatra dia nitohy nitatra, ary hitombo hatrany, nanomboka teo Manomboka amin'ny 1 martsa dia ho afaka hijery fantsona vaovao dimy ianao hanatsarana ny tolotra amin'ny fahita lavitra amin'ny fahitalavitra. Midika izany fa andian-tsarimihetsika, mozika, fampisehoana zava-misy marobe, sns., Amin'ny teny fohy, mahafinaritra sy atiny bebe kokoa ...
Ho fanampin'izay, Pluto TV dia te-hanao premiere ihany koa atiny vaovao ao amin'ny fantsona andiany Pluto TV, miaraka amin'ireo fizaran-taona roa voalohany an'ny Ilay namana be, fampifanarahana ny andian-tantara Mpinamana roa nataon'i Elena Ferrante. Ny vanim-potoana voalohany dia ny talata 16 martsa ary ny faharoa manomboka ny talata 22 martsa, ao amin'ny fizarana On Demand amin'ity sehatra ity.
Fantsona Pluto TV
Raha ampiana ireo fantsona vaovao 5 ireo dia efa ampiana tsy latsaky ny Fantsona 55 misy amin'ny Pluto TV ny volana martsa 2021. Vola tsy azo ovaina ho an'ny a sehatra malalaka.
Ary raha manontany tena ianao momba ny vaovao, ny lisitry ny fantsona nanampy dia:
Bibikely ho an'ny bibidia: ny fantsona misy lohahevitra misy lohahevitra natokana ho an'ity pawn malaza ity dia mampiseho fa afaka mijery amin'ny fantsona sasany ianao izao, ary afaka manaraka 24 ora amin'ity fantsona ity koa.
Pluto TV Action Kids: fantsona natokana ho an'ny atin'ny ankizy, ho an'ny ankizy kely. Miaraka amin'ny sarimiaina ary koa amin'ny tena sary. Ohatra, azonao atao ny mijery ny andiany Nickelodeon malaza, toa ny Avatar: The Legend of Aan'g, The Legend of Korra, The Ninja Turtles, Etc.
manan-karena: no toerana hanarahana ny seho MTV mahomby.
Pluto TV manadihady: fantsona vaovao iray hafa izay ho tonga amin'ny 22 martsa, ary hahafahanao mahita ny tatitra momba ny mistery, heloka bevava, sns.
Clubbing TV: farany, ity mpantsaka ity dia mikendry ireo mpankafy mozika elektronika. Ireo mpankafy mozika dia hanana seho mozika eo an-tànany 24 ora isan'andro, miaraka amin'ny fety malaza toy ny Heart Ibiza, Big Bang Festival, Sònar Reykjavik, Kappa FuturF festival, Maneless Music Festival, sns. Amin'ity tranga ity dia mila miandry kely kokoa ihany koa isika, hatramin'ny 22 martsa.
Dingana vaovao handrosoana amin'ny Pluto TV, ary mankany amin'ny tanjon'ny mahatratra 100 fantsona tamin'ny 2021 izay nasiana marika talohan'ny faran'ny taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Pluto TV: hanomboka premiere fantsona dimy maimaim-poana
Garuda Linux: fizarana famoahana Rolling-based Linux
AOS-P1: Fikarohana ny loharano misokatra Apple Open - Fizarana 1